၀ ယ်ယူသိုလှောင်ထားသည့် Vintage One Piece Bandage Monokini ပုံနှိပ်အမျိုးသမီး ၀ တ်ကူးဝတ်စုံ Push Up - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့် | WoopShop®
စပျစ်သီးကို One Piece ပတ်တီး Monokini ပုံနှိပ်ပါအမျိုးသမီးများနေ့ Swimsuit Up ကို Push
အရွယ် S M L XL XXL
အရောင် အပြာစင်း အနီရောင်အစင်း Black က အစင်း စိမ်းလန်းသော အနီရောငျ အမှောင်နီ ဝါသော အရွက်ပုံနှိပ်
S / အပြာစင်း M / အပြာရောင်စင်း L / အပြာစင်း XL / အပြာစင်း XXL / အပြာစင်း S / အနီရောင်စင်း M က / အနီစင်း L / အနီရောင်စင်း XL / အနီရောင်အစင်း XXL / အနီရောင်အစင်း S / Black က M / Black က L / Black က XL / Black က XXL / အနက်ရောင် S / စင်း M / စင်း L / စင်း XL / စင်း XXL / စင်း S / အစိမ်းရောင် M / အစိမ်းရောင် L / အစိမ်းရောင် XL / အစိမ်းရောင် XXL / အစိမ်းရောင် S / Red M / Red L / အနီရောင် XL / အနီရောင် XXL / အနီရောင် S / အနီနီ အနီ / အနီ L / မှောင်မိုက်နီ XL / အနီရောင်အမှောင် XXL / မှောင်မိုက်နီ S / အဝါရောင် M / အဝါရောင် L / အဝါရောင် XL / အဝါရောင် XXL / အဝါရောင် S / အရွက်ပုံနှိပ် M / အရွက်ပုံနှိပ် L / အရွက်ပုံနှိပ် XL / အရွက်ပုံနှိပ် XXL / အရွက်ပုံနှိပ်
Vintage One Piece Bandage Monokini ပုံနှိပ်အမျိုးသမီး ၀ တ်ဘောင်းဘီရှည် - အစင်းရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: Acetate, polyester, Spandex
အရောင်: အစိမ်း, က Black, အပြာ, အနီ, အဖြူ One Piece ရေကူးဝတ်စုံနဲ့
Size: S က, M, L, XL, XXL
ကျားမ: အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသမီး, အမျိုးသမီး
ပုံစံ: ရေကူးဝတ်စုံတက်မြင့်မားသော elastic တွန်းအားပေး
မြင့်မားသောလည်ပင်း swimsuit: မြင့်မားသောလည်ပင်း swimsuit အမှတ်တံဆိပ်ရေကူးဝတ်စုံအမြိုးသမီးမြား
အမျိုးအစား: Plus အားအရွယ်အစားရေကူးဝတ်စုံ
item အမျိုးအစား: One Piece Swimsuit
SIZE တွေဆီကနေ ခါး တင်ပါး CUP ယူကေ & UA အရွယ်အစား ဥရောပအရွယ်အစား ယူအက်စ်အေ SIZE
S ၃၂ "~ ၃၄" 81 ~ 86CM ၃၂ "~ ၃၄" 61 ~ 66CM ၃၂ "~ ၃၄" 86 ~ 91CM တစ်ဦးက ~ B ကို6~ 8 32 ~ 344~ 6
M ၃၂ "~ ၃၄" 86 ~ 91CM ၃၂ "~ ၃၄" 66 ~ 71CM ၃၂ "~ ၃၄" 91 ~ 96CM B ကို ~ ကို C 8 ~ 10 34 ~ 366~ 8
L ၃၂ "~ ၃၄" 91 ~ 96CM ၃၂ "~ ၃၄" 71 ~ 76CM ၃၂ "~ ၃၄" 96 ~ 101CM B ကို ~ ကို C 10 ~ 12 36 ~ 38 8 ~ 10
XL ၃၂ "~ ၃၄" 96 ~ 101CM ၃၂ "~ ၃၄" 76 ~ 81CM 40 "~ 42" 101 ~ 106CM B ကို ~ ကို C 12 ~ 14 38 ~ 40 10 ~ 12
XXL 40 "~ 42" 101 ~ 106CM ၃၂ "~ ၃၄" 81 ~ 86CM 42 "~ 44" 106 ~ 111CM B ကို ~: D 14 ~ 16 40 ~ 42 12 ~ 14
3XL 42 "~ 44" 106 ~ 111CM ၃၂ "~ ၃၄" 86 ~ 91CM ၄၄“ ၄၆” 111 ~ 116CM : D ~ E ကို 16 ~ 18 42 ~ 44 14 ~ 16
4XL ၄၄“ ၄၆” 111 ~ 116CM ၃၂ "~ ၃၄" 91 ~ 96CM ၃၂ "~ ၃၄" 116 ~ 121CM : D ~ E ကို 18 ~ 20 44 ~ 46 16 ~ 18
5XL ၃၂ "~ ၃၄" 116 ~ 121CM ၃၂ "~ ၃၄" 96 ~ 101CM ၃၂ "~ ၃၄" 121 ~ 126CM : D ~ E ကို 20 ~ 22 46 ~ 48 18 ~ 20
6XL ၃၂ "~ ၃၄" 121 ~ 126CM ၃၂ "~ ၃၄" 101 ~ 106CM ၃၂ "~ ၃၄" 126 ~ 131CM : D ~ E ကို 22 ~ 24 48 ~ 50 20 ~ 22
UK အီးယူအာရ် , ITA FRA ရု US
မှတ်စု: သင့်ရဲ့အရွယ်အစား Check နှင့်အရွယ်အစားစာရွက်ကနှိုင်းယှဉ်။ ကြောင့်ကွန်ပျူတာမော်နီတာ, အလင်းအိမ်, ဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများစသည်တို့နှင့်ထုတ်ကုန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုဖောင်းအကြားခြားနားချက်မှခြားနားချက်တစ်နည်းနည်းတည်ရှိပါလိမ့်မယ်။ လက်စွဲတိုင်းတာခြင်းကြောင့် 1-3 စင်တီမီတာသွေဖီခွင့်ပြုပေးပါ။
အယ်လ် producto llegó4Dias después dela fecha ။ Tuve Que abrir disputa, pero ahora cancelo disputa con Gusto အယ်လ် producto es Tal como se menciona ။ မသန်စွမ်းမိုင်: 155cm, 60kg y က 100 က de busto es perfecto talla အယ်လ် Aunque probaría pidiendo una talla menos ya Que Las သားဘီစီ copas ။ ငါ့ကို el traje က de baño encanta ။ အယ်လ် encaje es gruesita, y က Las costuras သား fuertes ။ Probare como queda después del lavado
Явнегопростовлюбилась !!!! купальникСупер!
Доставка 30 дней, купальникидеальносидит, размерысоответствуютзаявленнымпродавца!
espectacular! es idénticoala ဓာတ်ပုံ! calidad excelente! talla M က perfecta! ငါ့ကို encanta! recomiendo 100%
သာ 16 နေ့ရက်ကာလ၌ငါ၏အတံခါးကိုမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏! အလွန်ကောင်းစွာပတ်ရစ်။ ထိုအခါစူပါချစ်စရာလက်ဆောင်တစ်ခု (hairband နှင့်တော်တော်လက်ကောက်) နဲ့။ ငါ 1,74 မီတာဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ကြောင့်မေမေဝမ်းနှင့်ဝမ်းခွဲစိတ်တစ် EURO 40 / 42 ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အရွယ်အစားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် !! ငါသည်ဤ bathingsuit အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုချစ်ကြလော့ အရွယ်အစား, ပုံစံနှင့်အရောင်! ငါသည်အမြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်နှင့်စတိုးဆိုင်အလွယ်တကူ5ကြယ်များရရှိခဲ့သည်☆☆☆☆☆